प्रेरक प्रसंग : जीवनको मूल्य - Safal Stories
Home Short Stories प्रेरक प्रसंग : जीवनको मूल्य
भगवान गौतम बुद्ध आफ्ना चेलाहरुलाई जीवनको महत्व बारे बुझाइरहनुभएको थियो । एकजना गाउँले केही पर बसेर बुद्धका कुरा सुनिरहेका थिए । यत्तिकैमा ती गाउँलेले सोधे, ” भगवान ! हजुरले जीवन बारे बताईरहँदा मेरो मनमा जीवन सम्बन्धि एउटा जिज्ञासा आयो” । गौतम बुद्धले उनलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्ने अनुमति सहितको संकेत दिनुभयो ।
गाउँले सोधे, ” भगवान ! जीवनको मूल्य कति ? जीवन कति महत्वपूर्ण छ ? ” । गौतम बुद्धले उनको जिज्ञासा सुनेपछि गाउँलेलाई आफू तिर बोलाउनुभयो । त्यसपछि उनको हातमा एउटा चम्किलो ढुङ्गा दिंदै भन्नुभयो, ” पहिले यो ढुङ्गाको मूल्य पत्ता लगाएर आऊ । यो ढुङ्गालाई तिमीले बेच्न भने पाउनेछैनौ । ढुङ्गाको मूल्य बुझेर फ़र्किएपछि म तिमीलाई जीवनको मूल्य बताउनेछु ” ।
गाउँले ढुङ्गा लिएर बजार तिर गए । फलफूल बेच्ने ठाउँमा गएर सोधे, ” यो ढुङ्गाको मूल्य कति पर्छ ? ” । फलफूल पसलेले भन्यो, ” यो ढुङ्गा मलाई दियौ भने मैले एक झोला सुन्तला दिन सक्छु ” । त्यसपछि गाउँले तरकारी पसलमा गएर ढुङ्गाको मूल्य सोध्यो । तरकारी पसलेले उत्तर दियो, ” यो ढुङ्गाको सट्टामा मैले एक बोरा आलु दिन सक्छु ” । त्यसपछि गाउँले त्यो ढुङ्गा लिएर सुन पसलकहाँ गयो । सुन पसलेले ढुङ्गालाई ओल्टाई पल्टाई गर्यो र भन्यो, ” यो ढुङ्गा केही विशेष जस्तो छ । यो ढुङ्गा वापत मैले तिमीलाई एउटा सुनको औंठी दिन सक्छु ” । गाउँलेलाई अचम्म लाग्यो, ढुङ्गाको मूल्य त्यति ? त्यसपछि ऊ रत्नहरु बेच्ने जौहरीकहाँ गयो । जौहरी त्यो रत्न देख्नासाथ अचम्भित भयो । सोध्यो, ” तपाईंले यो रत्न कहाँबाट ल्याउनुभयो ? यो त अमूल्य रत्न हो । यसको मूल्य मैले कसरि भन्न सकूँ ? ” त्यसपछि उसले त्यो रत्नलाई ढोग्यो । जौहरीको क्रियाकलाप देखेर गाउँले झन् अचम्भित भए।
ढुङ्गा हातमा लिएर मनमा कुरा खेलाउंदै गाउँले फेरी बुद्धकहाँ गए । उनले सबैकुरा बेलिविस्तार गरे। त्यसपछि बुद्धले भन्नुभयो, ” फलफूल पसलेको लागि ढुङ्गा एक झोला सुन्तला बराबर भयो, तरकारी पसलेको लागि एक बोरा आलु, सुन पसलेको लागि एउटा सुनको औंठी बराबर भयो । त्यही ढुङ्गा जौहरीको लागि अमूल्य भयो । जीवनको मूल्य पनि त्यस्तै हो । जीवनको मूल्य व्यक्तिको दृष्टिकोणमा भर पर्छ । व्यक्तिले जीवनलाई आत्मसात गर्ने तरिकामा जीवनको मूल्य भर पर्छ । त्यस्तै, कोही व्यक्तिले तिमीलाई महत्व दिन्छ भने कसैले तिमीलाई महत्व दिंदैन । तिमीलाई त्यो व्यक्तिले कसरि हेर्छ, कसरि बुझ्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । कसैले तिमीलाई महत्व दिंदैन भने यसको अर्थ यो होइन कि, तिमी महत्वहिन छौ । जीवनको मूल्यलाई बुझ्न, आफूलाई माया गर ” ।
Previousसकारात्मक सोंच, सफलताको आधार : प्रेरक भनाइहरु
Nextस्मरणशक्ति कसरी बढाउने ?